Ka Qaybgalka Fiidiyowga ee Qalabka | Martech Zone
Jimco, Diisambar 30, 2011 Khamiista, Diseembar 29, 2011 Douglas Karr
Iyadoo fiidiyowgu uu sii kordhayo, waxaad u maleyn kartaa in dabeecadda aysan aad ugu kala duwaneyn aalad ilaa qalab. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira runtii waxoogaa caddayn ah oo liddi ku ah. Ooyala wuxuu soo saaray warbixin saddex-biloodle ah oo falanqeeyay habdhaqanka daawashada ee ka mid ah 100 milyan oo isticmaale. Wistiya ayaa sii daayay sawir-gacmeedkan oo muujinaya natiijooyinka xogta.
Tags: dhaqanka videodesktop videolaptop-ka fiidiyowga ahmobaylka fiidiyowgakiniin video ahdaawashada video